Jaamacadda Camuud Oo Xafiis Dhinaca Adeega Sharciga Ah Ka Furatay Magaalada Boon | Somaliland.Org
Jaamacadda Camuud Oo Xafiis Dhinaca Adeega Sharciga Ah Ka Furatay Magaalada Boon
December 23, 2012	Boorame (Somaliland.Org)- Jaamacadda Camuud ee magaallada Boorame ayaa xafiis cusub oo dhinaca adeega sharciga ah e looyaqaan Legal Clinic ka furtay degmada Boon.
xafiiskan oo ah kii labaad ee noociisa ah ee qaybta adeeda sharciga ee ay gacansaarka leeyihiin Kuliyada Sharciga iyo Shareecada ee Jaamacadda Camuud ayaa waxa uu noqonayaa kii labad ee Noociisa ah ee laga furo G/Awdal.
Madaxa Xafiiskan Adeega Sharciga Mud. Xasan Cali Xasan oo ka hadalay munaasabadan ayaa waxa uu sheegay ahmiyada uu leeyahay xafiiskani waxana uu yidhi “ waa xafiiskii labaad ee noocan ah ee aan ka furno G/Awdal, waxa loogu talo galay inuu dadka danyarta ah ee aan helayn ama hayan lacag ay ku qabsadaan qareeno u dooda oo dhinaca sharciga ah loo fududeeyo oo la siiyo qareeeno ka ilaaliya xadgudubka, sidoo kale xafiiskan ayaa waxa uu fursad siiyaa ardayda dhinaca sharciga barata ee J/Camuud.
Hormuudka Kuliyada Sharciga iyo Qaanuunka ee J/Camuud Dr. Maxamed Cali Nageeye oo isaguna ka hadlay madashan ayaa sheegay in xafiiskan ay ku lamaan yihiin adeegyo kale waxana uu yidhi “ Waxa aan u aragnaa fursad muhiim ah oo ay Boon heshay, waxa ku lamaan xafiiskan waxbarashadii dhinaca sharciga iyo shareecada islaamka ahayd oo loo soo dhaweeyay dadka reer Boon, waxa aan ku baraarujinaynayaa inay ka faaiidaystaan oo ay qaataan shahaadada caalamiga ah ee J/Camuud.
Gudoomiyaha J/Camuud Prof. Saleebaan Axmed Guuleed oo isaguna ka hadlay madashan ayaa waxa uu si balaadhan uga sheekeeyay taariikhda dhinaca iskaashiga iyo waxbarashada ah ee Degmada Boon, waxana uu intaasi daba dhigay in J/Camuud ay xidhiidh sokeeye la leedahay dadka reer Boon.
Prof. Saleebaan oo ka hadlaya ahmiyada xafiiskan ayaa yidhi “ Runtii sharciga barashadiisu waa muhiim, bulshaduna ma sina ee waxa jira dad badan oo aan awood u lahayn inay qareeno qabsadaan si ay u helaan adeegyada dhinaca sharciga ah ee ay u baahan yihiin, xafiiskani waxa uu fududaynaaa arintaasi, waxa uu u adeegayaa dadka inta jilicsan, ee aan haysan hanta ay sharci yaqaano ku qabsadaan, dulucduna waa in la helo cadaalad ay dadku wadaagaan.”
Maayarka Boon, Xildhibaano, Oday dhaaqameedyo iyo masuuliyiin kale oo reer Boon ah ayaa iyaguna madashan ka hadashay waxana ay soo dhaweeyeen xafiiskan oo ay tilmaameen inuu ahmiyad gaar ah u leyahay dadka degaanka.
Wixii intaasi ka dambeeyay ayaa wafdigani waxa ay soo kormeereen, hawlaha ku taariikhaysan Iskaa waxu qabsada ay dadka reer Boon caanka ku yihiin iyo xarunta kuliyada waxbarashada ee J/Camuud ku leedahay degmada Boon oo ah mid si balaadhan u shaqaysa.
Previous PostCadaymo ku wajahan wararka been abuurka ah ee laga faafiyay dugsiga Abaarso TechNext PostShir Lagu dejinayo Qorsheyaasha sanadka 2003-ka ee Wasaaradda Caafimaadka Oo ka furmay Hargeysa	Blog